Antony, soritr'aretina ary fitsaboana ny aty mivonto amin'ny alika | Tontolo alika
Hepatitis no teny fantatsika avy amin'ny teny grika hepar, izay midika hoe aty sy ny teny hoe itis, izay midika hoe mamaivay sy Midika izany fa toe-javatra pathological izay mamaivay ny atiny.
Na izany aza, ny fivontosan'ny aty dia misy antony maro ary manampy amin'ny fanavahana ireo karazana hépatite isan-karazany izany.
1 Ny antony mahatonga ny fivontosan'ny atiny amin'ny alika
2 Fambara ny fivontosan'ny aty amin'ny alika
3 Ny fitsapana izay ataon'ny mpitsabo biby raha misy olana amin'ny atiny ny alikanao
3.1 Fitsapana ra
3.3 Tantara iray
4 Fitsaboana ny fivontosan'ny aty amin'ny alika
4.1 Ahoana ny fomba hanonganana ny atin'ny alika?
5 Fanafody an-trano ho an'ny fivalanan'ny aty amin'ny alika
5.1 Sakafo mety
5.2 Infusions sy teas
5.3 Fandrahoan-tsakafo an-trano
6 Ny sakafo lavorary ho an'ny alika manana olana amin'ny aty
6.1 Sakafo sakafo ho an'ny alika misy fivontosan'ny atiny
Ny antony mahatonga ny fivontosan'ny atiny amin'ny alika
Ny anatomin'ny alika dia matetika tsy dia samy hafa be amin'ny an'ny olombelona sy ireo taova tena ilaina izay manan-danja lehibe amintsika, ho an'ny alikantsika koa ireo, toy ny atiny amin'ity tranga ity.
Ilaina ny aty mba hisian'ny fandanjana voajanahary ao amin'ny alikanay Noho ny maha tompon'andraikitra azy amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny metabolisma dia manana fiantohana izy fa esorina ireo singa misy poizina, amin'ny fitehirizana angovo, ny proteinina synthesizing, izy no tompon'andraikitra amin'ny famokarana bile ary koa manana anjara toerana amin'ny fametahana otrikaina.
Ny fivontosana ao amin'ny atiny dia mety ateraky ny sakafo tsy marina na koa izy io dia mety hateraky ny fipoahana tsy tapaka amin'ny singa misy poizina, izay miteraka fahasimbana lehibe amin'ny atin'ny atiny sy ny mety mahatonga ireo fahasimbana ireo ho lasa mitaiza.
Raha ny fahasimban'ny aty dia manimba ny fiasan'ny aty, ho hitantsika ny fisian'ireo famantarana matotra izay manondro fandidiana tsy ara-dalàna an'ity taova ity, toy ny sisa tavela.
Fambara ny fivontosan'ny aty amin'ny alika
raha mbola misy karazany maro ny hépatite amin'ny alikaZava-dehibe ny hahatsiarovantsika fa amin'ny tranga rehetra dia fivontosan'ny atiny na inona na inona antony, voalaza etsy ambany ny soritr'aretin'ity olana ity:
Jaundice, na amin'ny teny hafa dia ny mavo ny maso ary koa ny membrane mucous.
Ny fisian'ny ra ao amin'ny fonon'ny moka.
Ny fanaintainana ao amin'ny faritra misy ny kibony izay mety hiteraka tsy fahalavorariana.
Ny fanintona vokatry ny tsy fahombiazan'ny aty.
Mampitombo ny fivoahan'ny orona ary koa ny orkide.
Edema ambanin'ny tany.
Ny alika manana fivontosana amin'ny atiny dia tsy voatery asehon'ireo soritr'aretina tsirairay ireo, koa raha hitantsika fa misy ny sasany amin'ireo famantarana ireo izay efa noresahintsika teo aloha, tsy maintsy mitondra ny biby fiompintsika faran'izay haingana any amin'ny mpitsabo biby isika.
Ny fitsapana izay ataon'ny mpitsabo biby raha misy olana amin'ny atiny ny alikanao
Rehefa alika ahiahiana ho voan'ny aretin-kibo ny atiny dia entina any amin'ny mpitsabo biby, ny mpitsabo dia mila manao fitsapana kely hamaritana ny fitiliana ny biby. Ary ireo fitsapana ireo dia handany vola amin'ny fitsidihana ny mpitsabo biby. Noho io antony io dia te hampahafantatra anao ny karazana fitsapana azony atao izahay, ary iza avy ireo:
Izy io dia iray amin'ireo fitsapana ampiasaina indrindra, tsy ho an'ny fivontosan'ny atin'ny alika ihany, fa amin'ny ankapobeny fantaro ny toe-pahasalaman'ny alika. Ao anatin'izany no ahitanao raha misy fiovana ao amin'ny hemôrama, toy ny leukositosis, tsy fahampian-dra…; ary koa ny fanjakan'ny coagulopathy (fihenan'ny platelet, fisian'ny cirrhosis, fiovana ao amin'ny PT sy APTT…); na fanovana biokimika amin'ny soatoavina sasany, indrindra, ary mifandraika amin'ny aty, phosphatase alkaline na transaminases).
Ny ultrasound dia hita maso, izay ahafahan'ny manam-pahaizana mahita ny maha-izy azy io faritra io, raha misy ny tsy fetezana, raha betsaka ny olona tsy tokony ho ... Amin'ny ankapobeny, rehefa misy zavatra toa izany dia afaka manome anao hevitra, saingy saika io fitsapana io dia ampiarahina amin'ny fitsapana ra.
Fa maninona ny fitsapana ra amin'ny alika?
Ary farany, ny fitsapana farany natao tamin'ny alika dia mety ho histolojia, izany hoe biopsy aty. Atao amin'ny alàlan'ny famitahana ilay biby mba tsy hihetsika na hijaly. Ary ahafahanao mahafantatra ny ambaratongan'ny olanao aty, manomboka amin'ny fivontosana kely, salantsalany na mafy, ka hatramin'ny hépatite izay mety hitarika fibrosis amin'ny ambaratonga samihafa.
Fitsaboana ny fivontosan'ny aty amin'ny alika
Ny fitsaboana an'ity olana ity dia miankina amin'ny antony nahatonga azy io. Amin'ny hépatite mahazatra amin'ny fitsaboana dia tsy maintsy aseho famantarana izany fa izy indray dia tsy maintsy manatanteraka ny tanjon'ny fahafahana mamolavola ireo singa tsirairay nahatonga ny fahasimban'ny aty.
Ao amin'ny hépatite izay autoimmune, ny fitsaboana, toy ny tamin'ny tranga teo aloha, dia tsy maintsy simba, na dia hanome lanja ny fanafody azo omena sasany aza ny mpitsabo biby. fanafody izay tsindrona fanefitra, izay afaka mihetsika manokana amin'ny rafitra fiarovana mba hisorohana ny fahasimban'ny aty.
Raha izany no izy a areti-mifindra na antsoina koa hoe hépatite viralToy ny tranga hafa, ny fitsaboana dia mitohy ho simika satria tsy misy fanasitranana, azo atao ny mampiasa antibiotika mba hitazonana ny fifehezana ny aretina faharoa, ny vahaolana isotonic dia ampiasaina ihany koa hahafahana misoroka ny tsy fahampian'ny rano amin'ny tsy fahampian-drano, mpiaro ny aty ary sakafo izay dia voalaza ihany koa ny hypoprotein.
Ny veterinera dia tompon'andraikitra amin'ny fanondroana ny sakafo voalaza etsy ambony, na dia manana betsaka aza izy io tombontsoa amin'ny tranga misy amin'ny fivontosan'ny atiny, satria proteinina be dia be ao amin'ny atiny dia mety miteraka be loatra.
Ahoana ny fomba hanonganana ny atin'ny alika?
Rehefa mirehitra ny atin'ny alikantsika noho ny fahamamoana dia tsy maintsy entintsika any amin'ny mpitsabo biby io satria miankina amin'ny fanafody misy poizina nohaniny dia hihetsika amin'ny fomba iray na ny fomba hafa ilay matihanina. A) Eny, Raha mbola tsy mahasosotra ilay zavatra ary fotoana fohy dia kely taorian'ny nandraisana azy dia mety handoa ianao ka ny biby mamoaka azy, fa raha misy fisalasalana, dia hanome fanafody izay hanampy amin'ny fanafoanana azy amin'ny fomba hafa.
Fanafody an-trano ho an'ny fivalanan'ny aty amin'ny alika
Ny alika mijaly amin'ny olana ara-pahasalamana dia mampiahiahy anao be. Ka ny fanampiana anao hanana fiainana salama kokoa, ary koa mianatra momba ny fomba samihafa hanalana ny olanao, dia mety ho mora. Indrindra satria te hanokana ity habaka ity izahay hanampiana anao fantaro izay azonao atao raha manana alika mirehitra ny alikanao, na mahatsikaritra ireo soritr'aretina ianao ary te hanampy azy.
Anisan'ireo vahaolana an-trano anananao ireto manaraka ireto:
Diet, izany hoe ny sakafon'alikao, dia zava-dehibe indrindra hahatonga azy ho sitrana na tsy hanana olana amin'ny aty. Noho izany dia tsy maintsy fehezinao izay nohaninao betsaka. Mba hanaovana izany, dia mamporisika anao izahay hisafidy sakafo hanomezana azy angovo sy proteinina be dia be. Io dia hamela ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny biby, ankoatry ny proteinina afaka manamboatra fahasimban'ny aty. Ary izany dia hitovy amin'ny famahana ny ampahany amin'ilay olana.
Ny proteinina dia azo alaina amin'ny hena, fa koa amin'ny ronono, soja, sns.
Infusions sy teas
Toy ny fisotroana infusions sy teas manampy olona hanatsara ny fiakaran'ny vidin'ny aty, dia toy izany koa no mitranga amin'ny alika. Raha izany dia, ny rano sotroinao dia azo ovaina amin'ny fotoana isanandro ho an'ny dite matevina, tsilo amin'ny ronono, na infusions artichoke.
Ireo dia hanampy amin'ny fitsaboana ny aty amin'ny fananana ananany, ankoatry ny fampitoniana ny tsy mahazo aina amin'ny kibo, fanaintainana amin'ny ankapobeny, sns.
Ny iray amin'ireo vokatry ny alika manana atiny mivonto dia ny tsy fihinanany intsony. Arak'izay itiavanao sakafo sy noana dia lehibe kokoa ny fanaintainana ary mahatonga anao tsy te hihinana na inona na inona, mampidi-doza kokoa noho ianao mety ho tsy ampy sakafo. Noho io antony io dia maro ny mpitsabo biby no manome sosokevitra fa, raha tsy mandray sakafo na sakafo voahodina ianao dia mankanesa any amin'ny sakafo an-trano miaraka amin'ny fomba fahandro sy ny sakafo mifantoka amin'ny alika manana olana amin'ny aty.
Ny sakafo lavorary ho an'ny alika manana olana amin'ny aty
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny sakafo hamahanana alika izay misy mamaivay amin'ny atiny dia tokony hiorina amin'ny andian-tsiranoka izay:
Proteinina: Tena zava-dehibe satria afaka manampy amin'ny fanarenana ny fahasimban'ny atiny izy ireo. Ankehitriny, ny proteinina amin'ny hena dia manana ny olana fa misy azota izy ireo ary, rehefa potraka ao amin'ny vatanao, dia mamokatra amoniaka izy ireo, izay manimba ny aty ary koa misy poizina. Tsy midika izany fa tsy afaka manome hena azy ireo ianao, ohatra, ny akoho na ny vorontsiloza dia tsy manana olana toy izany ary akora ilaina amin'ny sakafony. Fa ny proteinina legioma kosa dia mahasoa kokoa ary hanampy ny biby fiompinao. Aiza no ahitanao azy? Azo antoka fa amin'ny tofu. Saingy ny alika hihinana tofu dia mety tsy ho vita mihitsy, noho izany dia mila mampiasa fomba hafa izay mitondra azy ianao, toy ny marika fihinan'ny alika sasany. Safidy iray hafa, ohatra, ny fromazy.
gliosida: Toy ny proteinina tsy maintsy misy kalitao, dia toy izany koa no miseho amin'ny tranga gliosida. Ampiasaina izy ireo hanomezana ny angovo biby ka tsy mila mamorona azy io amin'ny vatany, mba hifantoka amin'ny famerenana ny aty na hiarovana azy tsara. Inona no azonao omena azy? Vary nandrahoina. Io no sakafo gliosida tsara indrindra ho an'ny biby fiompinao.
fibre: Farany, miresaka momba ny fibre isika. Tsara kokoa izany raha avy amin'ny viegales, toy ny epinara, tsaramaso maitso, sns. Fa ny alika dia tsy dia tia legioma matetika, koa miasà menaka kely hanendasana akoho sy tongolo lay. Io menaka amin'ny sakafonao io dia hanome anao ny fibre ilainao.
Sakafo sakafo ho an'ny alika misy fivontosan'ny atiny
Avelanay ianao Fomba fahandro manokana azonao atao amin'ny alikanao raha manana atiny mirehitra izy. Amin'izany dia azo antoka fa te hihinana ianao ary hanampy azy ho sitrana haingana ihany koa.
Ireto ny akora ilaina: 200 henan'akoho misy hoditra (esory ny taolana), vary masaka 500 grama, karaoty 1, 10 grama, menaka legioma 10 grama (na menaka oliva fanampiny).
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataonao dia ny lapoaly diloilo. Arotsahy ny akoho miaraka amin'ny hoditra ary avelao ho mena kely. Tsy mila vita tsara izany, raha ataonao hatramin'ny farany dia ampy izay. Arotsaka avy eo ny vary efa masaka teo aloha ary koa ny karaoty (masaka koa) dia afangaro tsara. Azonao atao ny manampy menaka kely kokoa raha hitanao fa mijanona ho maina be izy io.
Izao dia mila miandry fotsiny ianao hangatsiatsiaka hanompo azy.
Mazava ho azy fa misy karazany hafa azo isafidianana. Ny sakao ihany no mamaritra ny alikanao satria, raha fantatrao fa misy legioma tiany dia azonao atao ny manararaotra sy manantona ny mpitsabo anao raha toa ka safidy tsara hanaovana recipe ho azy izy ireo ary mihinana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Antony, soritr'aretina ary fitsaboana ny aty voan'ny hoditra
jhoan dia hoy izy:
Tafandria mandry. Azafady, ny alikako dia tsy nihinana nandritra ny 3 andro ary tsy te hisotro rano, nanomboka tsy nahita ny fahitany izy ary avy eo orientation, namoaka feo fanaintainana izy rehefa nandry izy ary nijanona tampoka. Inona no azoko atao ankoatry ny mandeha any amin'ny veterinera.
Fanamarihana: mamely mafy izy rehefa sendra rindrina.
Mamaly an'i jhoan